Degso Recuva loogu talagalay Windows
Recuva waa barnaamij soo kabasho fayl oo bilaash ah kana mid ah caawiyayaasha ugu weyn ee adeegsadayaasha soo celinta faylasha tirtiray kombiyuutarkaaga. Beddel wanaagsan oo dhammaystiran, waxaad isla markiiba isku dayi kartaa EaseUS Data Recovery.
Wizard Data Recovery Wizard, oo hawada ku jiray 17 sano, wuxuu si buuxda u qabtaa dhammaan howlaha Recuva ay qaban karto. Intaas waxaa sii dheer, waxay bixisaa faahfaahin badan oo kala duwan oo aysan Recuva sameyn karin. Maaddaama ay tahay codsi ka cusub oo casri ah, waxay leedahay astaamo waxtar leh. Sababta ugu weyn ee aan ugula talinayno inay noqoto bedelka Recuva waa inaad si fudud u heli kartaa faylasha. EaseUS interface, goobaha feylasha si toos ah ayey hortaada kuugu yaalliin waxaad si fudud u arki kartaa feylka aad rabto inaad ka hesho faylasha.
Waxa kale oo ay fursad u leedahay inay ka soo ceshato faylasha la tirtiray saxammada dibedda. Sababtaas awgeed, kuma koobna oo keliya kumbuyuutarkaaga; Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa aaladaha sida HDD, USB Memory. EaseUS way soo ceshan kartaa faylal badan oo kaladuwan sida dukumiintiyo, sawiro, muusig iyo emayl. Tirada guud ee feylasha ay soo kaban karto waa ilaa 100. Xaqiiq ahaan, way kahoreysaa Recuva adoo siinaya astaamo badan oo kaladuwan iskuna soo uruurinaya wax walba hal saqaf hoostiisa. Waad booqan kartaa cinwaankan hadda si aad isugu daydo.
Waad iskaan kartaa faylasha laga tirtiray kombiyuutarkaaga adiga oo adeegsanaya saaxir barnaamijka kujira, oo aad bilaabi karto adeegsiga kadib talaabo aad u fudud oo rakibid ah.
Recuva, oo ka mid ah barnaamijyada guuleysta ee aad u isticmaali karto inaad ku soo ceshato feylal aad si kama ah ama si kama ah u tirtirtay kombuyuutarkaaga, waxaad ku baari kartaa sawirada la tirtiray, dhawaaqyada, dukumiintiyada, fiidiyowyada, feylasha la istimcaalay iyo e-mailada kombiyuutarkaaga. Baadhitaanka awgiis, faylasha aad ku soo ceshan karto ama aad dib u warshadayn karto ayaa laguu qori doonaa. Sidan oo kale, waxaad fursad u heli kartaa inaad si dhakhso leh dib ugu warshadeyso faylasha aad rabto.
Barnaamijka, oo siiya isticmaaleyaasheeda laba nooc oo iskaan ah oo kala duwan si loogu soo celiyo feylasha la tirtiray, waxaad ku sameyn kartaa baaritaan aasaasi ah oo muddo gaaban ah oo ku saabsan faylasha la tirtiray, iyo sidoo kale inaad sameyso baaritaanno qoto dheer oo muddo dheer soconaya. Haddii aadan helin faylasha aad rabto inaad ka soo kabato natiijada baaritaanka aasaasiga ah, xulashada raadinta qoto dheer waxay u badan tahay inay kuu oggolaato inaad hesho faylasha aad raadineyso.
Recuva, oo ku siinaysa fursad aad ku dhex iskaan karto saxannada gudaha ee kombiyuutarkaaga iyo sidoo kale saxannada dibedda ah ee aad ku xidhi doonto kombuyuutarkaaga, waxaad sidoo kale ku soo ceshan kartaa xogta la tirtiray ee ka mid ah saxannadaaga dibadda ama kaararka SD.
Dhamaadka nidaamka iskaanka; Haddii aad dooratid feylal sawir ah dariishadda faylasha dib loo soo ceshan karo, waxaad daawan kartaa muuqaal yar oo feylka sawirka ah ah si aad u goaansan karto feylasha aad rabto inaad si fudud uga soo kaban karto.
Gabagabadii, haddii aad u baahan tahay barnaamij si aad uga soo ceshato faylasha la tirtiray kombiyuutarka, Recuva waa inay hubaal ka mid noqotaa barnaamijyada ugu horreeya ee ay tahay inaad isku daydo.
Recuva waxay qabataa laba baaritaan, soo kabasho caadi ah iyo baaritaan qoto dheer, si ay u soo ceshato feylasha la tirtiray, soo cesho xogta Baadhitaanka hore wuxuu falanqeeyaa kombuyuutarkaaga wuxuuna raadiyaa faylal ay Recuva isku dayi karto inay soo kabato. Skaanka labaad ayaa markaa falanqeynaya feylashaan si loo xisaabiyo itimaalka soo kabashada guuleysan. Haddii aad joojiso iskaanka hore inta uu socdo, Recuva ma soo bandhigi doonto wax macluumaad ah oo ku saabsan feylasha. Haddii aad joojiso iskaanka labaad inta ay socoto, waxaad arki kartaa feylasha ay Recuva hesho, laakiin macluumaadka xaaladdu sax ma noqon doonaan sida iskaanka buuxa uu bixin doono. Haddaba aan eegno hababka soo kabashada;
Soo kabashada Caadiga ah: Marka ugu horeysa ee aad tirtirto feyl, Windows kama badin doono soo galida miiska faylka Master illaa aad ka isticmaaleyso feylka markale. Recuva waxay baareysaa Shaxda Faylka Masterka ee faylasha loo calaamadeeyay inay tirtireen. Maaddaama gelitaanka miiska faylka Master File ee faylasha la tirtiray wali la dhammaystirayo (oo ay ku jiraan markii faylka la tirtiray, intuu weynaa, iyo meesha uu ku yaallay darawalka adag), Recuva wuxuu ku siin karaa liis dhammaystiran oo faylal badan ah oo kaa caawin kara soo kabsado. Si kastaba ha noqotee, marka Windows u baahan yahay inuu abuuro feylal cusub, dib ayuu u isticmaalaa oo dib ugu celiyaa qoraalladan miiska faylka la geliyay iyo sidoo kale booska ku yaal darawalka adag ee faylasha cusub ay dhab ahaan deggan yihiin Taas macnaheedu waxa weeye in sida ugu dhakhsaha badan ee aad u joojiso adeegsiga kombuyuutarkaaga oo aad u maamusho Recuva, ayay fursadahaaga soo kabashada faylashaadu u fiicnaanayaan.
Nidaamka baaritaanka qoto dheer: Nidaamka baaritaanka qotada dheer wuxuu adeegsadaa miiska Master File Table si uu u raadiyo faylasha iyo waxyaabaha ku jira gaariga. Recuva waxay baareysaa koox kasta (baloog) darawalka si ay u hesho madax faylal ah oo muujinaya in feyl socda. Madaxyadan ayaa u sheegi kara Recuva magaca faylka iyo nooca (tusaale, JPG ama DOC file). Sidaa darteed, iskaanka qotada dheer wuxuu qaataa waqti dheer. Waxaa jira kumanaan nooc fayl ah oo Recuva ayaa aqoonsan kara kuwa ugu muhiimsan. Deep Scan waxay si gaar ah awood ugu leedahay inay ka soo kabato noocyada faylka ee soo socda:
Sawirro: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF
Xafiiska Microsoft (kahor 2007): DOC, XLS, PPT, VSD
Codka: MP3, MP2, MP1, AIF, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A
Arkiifiyada: RAR, ZIP, CAB
Noocyada kale ee faylka: PDF, RTF, VXD, URL
Haddii feylku uusan ku kala qaybsamin wadista, Recuva ma awoodi doonto inay soo uruuriso oo kala-jajabku wuxuu si xun u saameyn doonaa geeddi-socodka soo kabashada.
Ku soo cesho Faylasha la tirtiray ee leh Recuva
Recuva Wizard wuxuu ku bilaabayaa asal ahaan markii aad bilowdo Recuva wuxuuna kugu haggaayaa habka soo kabashada faylka. Marka waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad marto tallaabooyinkan oo aad dib u fadhiisato.
Kaliya dhagsii badhanka xiga si aad ugu sii socoto shaashadda koowaad.
Ma dooneysaa inaad soo ceshato dhammaan faylasha tallaabada labaad ee saaxir ama miyaad dooneysaa inaad soo ceshato nooc feyl gaar ah? wuxuu kaa codsanayaa inaad sheegto. Mid kasta oo ka mid ah qaybaha faylka wuxuu soo bandhigayaa oo keliya faylasha adeegsada kordhinta soo socota:
Dhammaan Faylasha: Tani waxay raadineysaa dhammaan faylasha natiijooyinka baaritaanka faylka, iyadoon loo eegin nooca feylka.
Sawirro: Tani waxay raadineysaa faylasha JPG, PNG, RAW, GIF, JPEG, BMP iyo TIF.
Muusig: Tani waxay raadineysaa MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, FLAC, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MIDI, MID, RMI iyo MP2 faylasha.
Dukumiinti: Tani waxay raadineysaa DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX iyo ODC.
Video: Tani waxay muujineysaa AVI, MOV, MPG, MP4, FLV, WMV, MPG, MPEG, MPE, MPV, M1V, M4V, IFV AND QT files.
Tifaftirayaasha: Tani waxay muujineysaa ZIP, RAR, 7Z, ACE, ARJ iyo faylasha CAB.
Emails: Tani waxay muujineysaa faylasha EML iyo PST.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahatid inaad soo ceshato feyl aan lahayn mid ka mid ah kordhintaan, waa inaad doorataa Dhammaan Faylasha.
Saaxirku wuxuu kugu kicinayaa inaad cadeyso halka feylasha markii hore laga tirtiray marxaladan. Haddii aad doorato Dukumintiyadayda, Recycle Bin, ama meel gaar ah, Recuva waxay iska baareysaa oo keliya meesha aad cayimayso halkii aad ka baari lahayd wadista oo dhan faylasha la tirtiray
Hadda waxaad diyaar u tahay inaad raadiso faylasha la tirtiray. Si aad u bilowdo hawsha iskaanka, si fudud u riix batoonka Start.
Horumar: Piriform Ltd